တရုတ်နိုင်ငံ ၌ လူဦးရေ ၁.၁၈ ဘီလီယံကျော် အား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ Haidian ယာယီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောေနရာ၌ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁.၁၈ ဘီလီယံကျော်ကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်အထိ စုစုပေါင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပမာဏ ၂.၆၆ ဘီလီယံကို ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း Mi Feng မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် အိုမီခရွန် ဖြစ်ပွားကြောင်းေဖာ်ပြထားသည့် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း စုစုပေါင်း ၇၇ ခုရှိနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတဝန်းကူးစက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်တိုးပွားလာသောဖိအားများနှင့် ြကံုေတွ့နေရတယ်” ဟု Mi ကပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နှစ်သစ်ကူးနေ့နှင့် နွေဦးပွဲတော် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ရည်မှန်းချက်ထားကာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်နှင့် အကြီးတန်းအရာရှိ He Qinghua မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသော ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း
nucleic acid ရလဒ်များ နှင့် ကျန်းမာရေး ကုဒ် စစ်ဆေးမှုများသည် နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် လိုအပ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Over 1.18 bln Chinese fully vaccinated against COVID-19
BEIJING, Dec. 18 (Xinhua) — Over 1.18 billion Chinese people have been fully vaccinated against COVID-19,aspokesperson for the National Health Commission said atapress conference Saturday.
A total of 2.66 billion COVID-19 vaccine doses had been administered as of Friday, said Mi Feng.
“China is meeting the growing pressures of guarding against inbound cases, withatotal of 77 countries and regions having reported cases of the Omicron variant of COVID-19,” Mi added.
As the New Year’s Day and the Spring Festival draw near, China will continue its efforts on targeted prevention and control of the COVID-19 epidemic, said He Qinghua,asenior official with the commission.
Negative nucleic acid test results within the past 48 hours and health code verifications are still required as permits for daily errands, He added. Enditem
ပွင့်လင်းကောင်းကင်ယံ စာချုပ်မှ တရားဝင်နုတ်ထွက်ကြောင်း ရုရှားပြော